मृतकका श्रीमानको प्रश्न : रियाको मृत्यु हुँदा अरुलाई किन केही भएन ? -
मृतकका श्रीमानको प्रश्न : रियाको मृत्यु हुँदा अरुलाई किन केही भएन ?
VoiceNp	प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २२, २०७७ समय: २१:०१:३१
काठमाडौं । भक्तपुरमा आइतबार राति पानै १ बजे भएको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी ३० वर्षीया रिया श्रेष्ठको परिवारले दुर्घटना योजनाबद्ध भएको आशंका गरेको छ । त्यसको गम्भीर छानबिन गर्न माग गर्दै आमा सम्झनाले महानगरीय प्रहरी वृत्त, ठिमीमा किटानी जाहेरी पनि दिइसकेकी छन् ।
रियाका पति राजुले सवारी दुर्घटना हुँदा श्रीमती रियाको मृत्यु हुनु र अरु सबै सकुशल रहनु नै शंकाको मुख्य कुरा भएको बताए ।
‘रियाको चोट र गाडीमा हुने अन्यको अवस्था मात्रै हेर्दा पनि धेरै कुरा थाहा भइहाल्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अस्पताल लैजानुपर्नेमा चालकसहित सबै जना मध्यराति भागे भन्ने कुरामा पनि शंका गर्ने ठाउँ छ ।’
मृतकका पति राजुले घटनाबारे यसरी बेलिविस्तार लगाएका छन् –
म पेशाले कन्टेनर चालक हुँ । श्रीमती ३० वर्षीया रिया र ७ वर्षको छोरासहित धुम्बाराही, पिपलबोटमा डेरा गरेर बस्थ्यौं । कामको सिलसिलामा म काठमाडौं बाहिर गइरहेको हुन्छु ।
श्रीमती रियाले कतै जानुपर्दा सधैँ मलाई भनेरै जान्थिन् । आइतबार राति म विराटनगरमा थिएँ । त्यो दिन मलाई रियाले केही पनि भनेकी थिइनन् ।
बरु नजिकै रहनु भएको सासु आमाले राति ९ बजे कल गर्दा ‘नेट पनि चलेको छैन, टिभी पनि छैन’ म सुतेँ, डिस्टर्ब नगर्नु भनेकी थिइन् । त्यसपछि केटाहरुले (दुर्घटनामा परेको कारका सवारी चालक रञ्जित कार्की लगायत) फकाइफुल्याइ लगे, कता केके गरे, थाहा छैन ।
अपहरण गरेर लगे कि फकाइफुल्याइ गरेर बलात्कार गर्न लगेका हुन्, घरबाट निस्किएको मलाई बिहान मात्र थाहा भयो । त्यो दिन छोरा पनि सासुआमाको पल्लो घरमा बसेको थियो ।
मध्यराति भएको घटना मैले बिहान साढे ९ बजे मात्रै खबर पाएँ । त्यसवेला गाडीमै सुतिरहेको थिएँ, खबर सुन्नेबित्तिकै अत्तालिँदै बिहानकै फ्लाइटबाट काठमाडौँं आएँ ।
उनले सासुको एटीएम कार्ड बोकेकी रहिछन् । त्यही आधारमा प्रहरीले परिवारमा फोन गरेको रहेछ ।
किटानी जाहेरीका मुख्य विपक्षी कार्कीलाई पनि भेटेँ । उसले अन्य तीन जना महिलासहित दिउँसै नगरकोट गएको भनेको छ । त्यहाँ दुई जनाले तोङ्बा खाएको रे । दुई जनाले जुस खाएर बसेको भन्छ ।
कार्कीले नगरकोट नै बसौं भनेर दबाब दिएको पनि रहेछ । अरु दुई जनामध्ये एक जनाले सोमबार बिहानै बुटवल जानुपर्ने भनेपछि ७ बजे फर्किएका रहेछन् । त्यहाँबाट फर्किएर रियालाई घरमा छाडिदिएका रहेछन् ।
तर, राति ९ बजेपछि के भयो थाहा छैन । उनलाई राति कति बजे घरबाट फेरि लगियो भन्ने पनि थाहा छैन ।
म पनि चालक भएको नाताले गाडीको अवस्थाले पनि अलिकति अनुमान लगाउन सक्छु, त्यत्रो दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु हुँदा कसरी अरु जस्ताको तस्तै रहन सक्छन् ? अनलाइनखबरबाट